काठमाडौं २६ का वडाध्यक्ष तिवारी भन्छन्ः म स्थानीय सरकार हो, मलाई कसले रोक्छ ?(भिडियोसहित) - TV Annapurna
विद्यमान नियम कानुन सबैलाई समान रूपले लाग्नेमा कुनै शङ्का नहोला । कानुनको उल्लङ्घन गर्ने चाहे जो सुकै होस कारबाहीको भागीदार बन्नै पर्छ । तर कतिपय अवस्थामा ठुला बडा भनिएकाहरूले कानुन उल्लङ्घन गरे पनि कारबाहीको भागीदार बन्न बाट जोगिन खोज्छन् । पावर,पहुँच र पैसाको प्रयोग गरेर पनि कारबाहीबाट उम्किएका प्रशस्तै उदारहण छन् । आइतबार काठमाडौँ ठमेलको सवारी निशेध क्षेत्रमा एक जना यात्रु मोटरसाइकल कुदाएरै आइपुगे । सँगै डियुटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरी जवानले उनलाई रोक्ने प्रयास गरे । उनीहरूबिचको संवादको केही अंशः
ट्राफिक प्रहरीः(सिठ्ठी बजाउँदै) सर, रोक्नुस् न ।
यात्रुः किन रोक्ने ?
ट्राफिकः यो भेहिकल फ्री क्षेत्र हो यहाँ सवारी चलाउन पाइँदैन । तपाइले सायद नयाँ देखेर मलाई नटेरेरै होला अघि सम्झाएर पठाएको थिए । तर फेरि चलाउँदै आउनु भो ।
यात्रुः तिमीलाई चाहिएको के हो ? भन
ट्राफिकः मलाई केही चाहिएको होइन सर, तपाइले नियम उल्लङ्घन गर्नु भो । तपाइको लाइसेन्स दिनुस् । नियमानुसार रसिद काट्नु पर्छ ।
यात्रुः मैले किन दिने लाइसेन्स ? तिमीले के गर्न सक्छौँ ?
यति भन्दै उनी अघि बढ्न खोज्दै थिए । तर हाम्रो (टिभी अन्नपूर्ण) क्यामेरा देखेपछि उनले आफ्नो लाइसेन्स त दिए । तर नियम उल्लङ्घन गरेबापत काट्नु पर्ने रसिद भने नलिएरै गए । उनी थिए ख्यामराज तिवारी । उनी त्याहाबाट गएपछि उनको लाइसेन्समा हेर्दा थाहा भयो । एक जना स्थानीयका अनुसार उनी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २६ का वडाध्यक्ष रहेछन् । सायद त्यही भएर उनले ट्राफिक प्रहरीलाई त्यस्तो व्यवहार गरेका हुन सक्छन् प्रत्यक्षदर्शी अर्का स्थानीयले बताए । उनी त्यो घटनाको केही बेर अघि पनि त्यही बाटै गएका रहेछन् तर ठुलो कुरा गरेपछि एक पटकलाई भन्दै ट्राफिक प्रहरीले छोडिदिएका रहेछन् ।
प्रदेश ७ को पहाडी जिल्लाबाट त्यही दिन सरुवा भएर डियुटी सुरु गरेका ती प्रहरीलाई भने उनको त्यो व्यवहारले साह्रै चित्त दुखेछ । टिभी अन्नपूर्णसँग उनले दुखेसो पोख्दै भने, वहाँको व्यवहारले मलाई साह्रै दुख लाग्यो । म वहाँको घरको नोकर त होइन नि ? वहाँले मलाई नोकरको जस्तो व्यवहार गर्नु भयो । मैले नियमानुसार हाम्रै एआइजी साहब आए पनि त्यो गर्नु पर्थ्यो ।‘‘ उनले प्रश्न गर्दै थपे, नियम त सबैलाई लाग्नु र्पयो नि ?
यो मात्रै एउटा घटना थिएन । आइतबार बिहान मात्रै डियुटी सुरु गरेका उनले सम्झिए, बिहान पनि एक जना व्यक्तिले त्यस्तै व्यवहार गर्नु भयो । उनले सुनाए, यसै गरी मैले वहाँलाई पनि रोके । वहाँले पनि अटेर गर्नु भयो । १०३ मा फोन गर्दै एसएसपी बसन्तर कुमार सरको फोन नम्बर माग्नु भयो र म वहाँलाई नै कुरा गर्छु भन्दै जानु भयो । उनको परिचय भने खुलाउन सकेनन् ।
ट्राफिक प्रहरी बिट ठमेलका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक निर्मल कुमार पन्तले उक्त घटनामा दुर्व्यवहार भन्दा पनि सामान्य वादविवाद भएको बताए । उनले भने, यस्तो क्षेत्रमा बढी नियम उल्लङ्घन हुन्छ । सामान्य वादविवाद पनि भइरहन्छ । वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीको विषयमा उनले भने, वहाँको लाइसेन्स हामीसँग छ । अहिलेसम्म लिन चाहिँ आउनु भएको छैन । नियम उल्लङ्घन गर्नु भएको छ । नियमानुसार कारबाही हुन्छ । उनले नियम उल्ंघन गर्ने सबैलाई कारबाही गरिने समेत बताए ।
ट्राफिक प्रहरीलाई गरेको दुव्र्यवहार बारे कामपा वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले भने आफुले दुव्र्यवहार नगरेको बताए । आवेगमा आएर सामान्य विवाद भने भएको स्वीकारे । उनले भने, डिउटी अफिसरले मलाई चिनेनन् । म पनि स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि हो । मैले जनताको क्षेत्रमा जान पाउने कि नपाउने ? उनले प्रश्न गरे । त्यो क्षेत्रमा प्रहरीको डिएसपी चाहिं जान पाउने मैले किन जान नपाउने ? म पनि त जनताको प्रतिनिधि हो नी । त्यो क्षेत्रमा धेरैले पासका नाममा पनि निशेधित क्षेत्र तोड्ने गरेको बताए । उनले त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको समेत औल्याए । तर उनले नियम उल्लंघन गरे वापतको कारबाही भोग्न भने तयार रहेको बताए ।